4,1% ny heverina ho fitomboan’ny harin-karena faobe miainga amin’ny fampiasam-bola ankapobeny heverina ho 22,6%. Nambara fa ilaina ny fanohizana ireo tetikasa tamin’ity taona ity mifototra amin’ny fananganana fotodrafitrasa manerana ny Nosy ambara fa mitondra fanorenan’asa sy fampandrosoana isam-paritra. Heverina ho 0,8% ny tahatombon’ny harinkarena faobe amin’ity taona ity satria nihena hatramin’ny 439,8 miliara ariary ny vola niditra tamin’ny alalan’ny hetra . Tsy nisy afa-tsy 8,9% ny taha ny fampidiran-ketra, ary 6,3% ny “déficit budgetaire”, saingy heverina fa hitombo ny taona 2021, hoy ny fanjakana. Ny sehatry ny fihariana eo amin’ny fambolena, fiompiana, jono, famokarana zaitra, asa fanorenana, trano fandraisam-bahiny, fitaterana ary ny indostria mpitrandraka no hitarika amin’izany fanarenana ara-toekarena izany, kanefa miankina amin’ny fivoaran’ny valanaretina ny ahatanterahan’izany, hoy ny fanjakana.